Leaked a Fortnite egwuregwu egwuregwu na ekwentị gam akporo | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Fortnite, Egwuregwu gam akporo, Nkuzi
Fortnite na-eru nso iru Android, ma n'otu oge ahụ gaa n'ihu. A ga-ewepụta Epic Games egwuregwu naanị maka Galaxy Note 9 nwa oge. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya na mgbe oge ụfọdụ gasịrị, a ga-ebupụta ya na Play Store. Mana anyị enweghị data gbara ọkpụrụkpụ na nke a. Ma anyị nwere egwuregwu egwuregwu nke egwuregwu ahụ na ekwentị gam akporo.
Ọ gbapụwo n'ime awa ole na ole gara aga. Na vidiyo ị nwere ike ịhụ onye ọrụ na-egwu Fortnite na Galaxy S9 +. Site na ihe ga-ekwe omume, ọ dị ka, ịkpọ aha Epic Games na ụdị ọzọ nwere otu sistemụ arụmọrụ.
Na mgbakwunye, ekele na vidiyo a anyị nwere ike ịnweta echiche doro anya nke ihe egwuregwu ahụ ga-ahapụ anyị mgbe a ga-ebupụta ya n'ọdịnihu maka ekwentị nwere sistemụ arụmọrụ Google. Anyị nwere ike ịhụ ihe eserese ya na egwuregwu nke ya.
Dị ka atụ anya, Fortnite anaghị ada mbà na ogo nke eserese ya. Site n'oge ruo n'oge ị pụrụ ịhụ obere ntụpọ na egwuregwu ahụ, ikekwe n'ihi nsogbu ndakọrịta. Mana na mkpokọta ọ na-ahapụ ezigbo mmetụta, ọ ga-enyekwa ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
Yabụ anyị hụrụ nke ahụ Fortnite na-arụ ọrụ zuru oke na Galaxy S9 +. Ihe doro anya na-enye ndị ọrụ olileanya na-enwe ike igwu egwu Epic Games na ekwentị ndị ọzọ karịa Galaxy Note 9. Ma ugbu a, anyị ga-echere oge ahụ na-abịa.
N'ime ụbọchị taa a ga-ewepụta Galaxy Note 9, anyị nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara njikọ dị n'etiti Epic Games na Samsung. A) Ee, Anyị nwere ike ịmata mgbe aga - ebido oru Fortnite maka ekwentị niile na gam akporo. Anyị na-atụ anya ịnweta data n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Leaked 5 nkeji nke Fortnite gameplay na gam akporo